Weji noocee ah ayuu yeelan karaa mudaharaadka ay berri iclaamiyeen mucaaradka? | Saxil News Network
Weji noocee ah ayuu yeelan karaa mudaharaadka ay berri iclaamiyeen mucaaradka?
February 18, 2021 - Written by editor
Maalinta berri ee Jimacada ah ayaa la filayaa in uu magaalada Muqdisho ka dhaco mudaharaad ay ku dhawaaqeen madaxda mucaaradka Soomaaliya, halka dowladda federaalka ay mamnuucday isu imaatinka bulshada, si loo yareeyo fiditaanka Fayraska Korona ee sare u kacay.
Uma muuqato in golaha musharraxiinta mucaaradka ee dibadbaxa iclaamiyay ay u hoggaansami doonaan amarka lagu xanibay isu imaashaha, waxayna sheegeen in dibadbaxooda uu nabad yahay ayna ka qeyb galeyaasha ugu baaqeen in ay soo xirtaan maaskarada wejiga.
Warqad ay golaha musharraxiinta mucaaradka u direen wasaaradda amniga ee federaalka ayey ku sheegeen in dastuurka uu u fasaxayo in ay cabashadooda ku muujiyaan dibadbax.
“Qodobka 20-aad ee dastuurka federaalka ah wuxuu tibaaxayaa xorriyadda kulanka, bannaanbaxa, cabashada iyo codsi wadareedka, wuxuuna u dhigan yahay sidan: ‘Qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu abaabulo, kana qeyb galo kulamo aa bannaanbax oo si xasilooni ah cabasho loogu muujinayo iyada oo aan oggolaansho loo baahneyn.'”
Ujeeddada isu soo baxa ayaa ah in mucaaradku ay muujiyaan sida ay uga soo horjeedaan dowladda, oo ay ku tilmaameen “mid aysan aqoonsaneyn oo waqtigeeda uu idlaaday”.
Cabsi laga muujinayo qalalaase
XIGASHADA SAWIRKA,SOCIAL MEDIA
Inkastoo xaaladda magaalada Muqdisho ay xasilan tahay maanta, haddana waxaa jirta hadal-heyn walaac xooggan looga muujinayo wajiga uu yeelan karo mudaharaadya Jimcada.
Dowladda Soomaaliya ayaa ka digtay in bannaanbaxaas laga qeyb galo, maadaama uu waddanka xilligan ku jiro xaalad adag oo dhinaca caafimaadka ah, oo cudurka Covid-19 uu mar kale faro ba’an ku hayo Soomaaliya.
Dhinaca kale, Wasaaradda Amniga ayaa sheegtay in mudaharaadkan “uu horseedi karo khatar”, lagana yaabo in weerarro lagu bartilmaameedsado.
Dowladda Soomaaliya oo ka hadashay banaanbaxa la filayo in mucaaradka ay qabtaan
Heshiis laga gaaray khilaafka doorashada Soomaaliya
Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa muwaadiniinteeda uga digtay khatar ka dhalan karta mudaharaadkaas, waxayna usoo jeedisay talooyinkan:
In aysan u dhawaanin goobta uu mudaharaadka ka dhacyo
In ay si dhow ula socdaan warbaahinta maxalliga ah
In ay iska ilaaliyaan meelaha ay dadka badan joogaan
In aysan is muujinin oo ay aqoonsigooda qariyaan
In Warqadahooda safarka ay soo dhaweystaan
In ay si iskood ah u qorsheystaan badbaado iyagoo aan isku haleyneynin dowladda Mareykanka
Haddaba wajiga uu mudaharaadkan yeelan karo ayaan ahayn mid lasii saadaalin karo.
Xuseen Sheekh Nuur oo ka tirsan Xarun daraaseysa Arrimaha Amniga ee Geeska Afrika ayaa BBC-da u sheegay in xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ay saameyn weyn ku yeelan karto nabadgalyada.
“Nasiib darro, dalku wuxuu galay xaalad aan la hubin oo dowladdii xilligeeda uu dhammaaday, doorashana aysan soconin. Dabcan horay way u dhici jirtay in dowlad uu waqtigeeda dhammaado laakiin waxaa socon jiray dhaqdhaqaaq doorasho oo aan cillad ka taagneyn. Sidaas darteed waxaa dhici karta in fatqalalo siyaasadeed ama rabshado ay ka dhashaan xaaladdan, sidoo kalena Al-Shabaab ayaa mar walba isku dayda in ay ka faa’iideysato habacsanaanta dowladda.” Ayuu yidhi Xuseen.
Muxuu mudaharaadkan uga duwan yahay kuwii hore?
Mudaharaadka Jimcada oo ka dhici doona agagaarka taallada Daljirka Dahsoon ayaa dibadbaxyadii hore uga duwanaan doona arrimo ay ka mid tahay xaaladda hadda taagan oo ah mid aad u cakiran.
Tusaale ahaan dalka oo ku jira kala-guur iyo cudurka corona oo soo labokacleeyay.
Laakiin arrinta kale ee uu uga duwan yahay mudaharaadyadii hore waa in ay hoggaamin doonaan madaxda Golaha Musharraxiinta Mucaaradka.
Hoggaamiyeyaasha dibadbaxa ka qeyb gali doona waxaa ka mid ah Labo madaxweyne oo hore – Shariif Sheekh Axmed, Xasan Sheekh Maxamuud – iyo Ra’iisul Wasaare hore, Xasan Cali Kheyre.
Maxaa loo doortay Daljirka Dahsoon?
Ma cadda sababta rasmiga ah ee ay Mucaaradka Dibadbaxooda ugu xusheen Daljirka Dahdoon, halkaasoo ah meel ay dad badan ku adkaan karto in ay tagaan, amnigeedana si weyn isha loogu hayo.
Waxayse u muuqataa in sababta lagu doortay ay tahay maadaama ay u dhowdahay xarunta madaxtooyada Soomaaliya ee saldhigga u ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, sidoo kalena ay ku dhowdahay bar koontarool oo laga ilaaliyo Villa Somalia.
Mudada xilheynta madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo afar sano ahayd ayaa ku ekeyd 8dii February. Mucaaradku waxay sheegeen inaysan madaxweynaha aqoonsaneyn. Dowladdu se waxay sheegtay in madaxweynahu xilka heyn doono ilaa inta laga dooranayo maamul cusub. Ma jiro waqti la og yahay oo ay doorashadu dhici doonto.
MAXKAMAD KU TAALLA INGIRIISKA OO XUKUNTAY NIN SOOMALI AH OO XAASKIISII DILAY
Kumuu ahaa Jeneraal Maxamed Nuur Galaal?
WASIIRKA ARIMAHA DIBADA SOMALILAND YAASIN FARATOON AHNA MUSHARAXA GOLAHA WAKIILADA OO KORMEER KUTAGAY GOOBAHA KAADH BEDELKA EE GOBOLKA SOOL
“Xisbiga Kulmiye Beelaha Gabooyo Waxuu Ku Hayaa Takoor,Mana Jirto Lacag Uu Naga Daayay”Suldaan Abu-sufiyan.
Muuse Biixi Oo Qaabilay Suldaanka Guud Ee Beelaha Isaaq.